Raharaha Esplanade Analakely : Notorian’ny mpivarotra ry Ravalomanana Mivady -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha Esplanade Analakely : Notorian’ny mpivarotra ry Ravalomanana Mivady
Mihenjan-droa ny tady eo amin’ireo mpivarotra anaty trano voatokana ao anatin’ny Esplanade Analakely sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), amin’izao fotoana izao.
Raha ny vaovao voaangona, mikasa ny handrodanana ilay trano fivarotana voatokana ao amin’ny Esplanade Analakely ny eo anivon’ny CUA. Tsy vitan’izay ihany fa eo ihany koa ny fandroahana ireo mpivarotra ao anatiny sy manodidina ny Esplanade.
Noho izay indrindra, ankoatra ny fametrahan’izy ireo sora-baventy amin’iny sisin’ny Esplanade amin’ny fangataham-pametraham-pialan’ny Ben’ny Tanàna, Lalao Ravalomanana, iny, milaza ny hanatanteraka diabe hihazo ny Antenimieram-pirenena ireo mpivarotra tarihin’ny filohan’ny Vondrona Miaro ny Zon’ny Mpanjifa, Ratsimbazafy Eugène. Raha ny fanazavan’ity farany, hametraka fitarainana sy fangatahana amin’ny tokony hametrahan’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra mivady fialana eny amin’ny Antenimieram-pirenena izy ireo ary koa hametraka ny fangatahana ny fametrahana amin’ny toerany ireo mpivarotra izy ireo amin’izany.
Ankoatra izay, raha toa ka mizizo hiroso amin’ny fandrodanana ilay trano fivarotana manokana eo afovoan’ny Esplanade io ny CUA, hiroso amin’ny fidinana an-dalambe ireo mpivarotra, mandra-piandry izay fandraisan’andraikitr’ireo tompon’andraiki-panjakana, araka ny fanazavana hatrany.
Raha ny nambaran’ireo mpivarotra miaraka amin’ny lehiben’ny Vondrona Miaro ny Zon’ny Mpanjifa mantsy, kasain’ny Ben’ny Tanàna mivady, Lalao Ravalomanana, hamidy amin’ny teratany vahiny ny Esplanade Analakely.
“Tsy hihemotra amin’ny hevitray izahay.Ny CUA rahateo efa nangatahanay fihaonana amin’ny hitadiavam-bahaolana maharitra iraisana saingy, tsy nipoitra mihitsy izy ireo hatramin’izao. Noho izay indrindra, hiroso amin’ny dingana manaraka izahay amin’ny tsy hanekenay ny fanakorontanana lava izao ny mpivarotra”, hoy ny solontenan’ny mpivarotra ao anatin’ny Esplanade Analakely.